Ciidamada Canada oo Taariikhda Markii ugu Horeysey Loo Sameeyey Wadaad Islaam ah
Daawo Halkan... ama halkan [Haddii kale eeg halkan]
[XUSUUS: si aad u daawatid marka hore soo rogo WindowsMedia Player]
Bisha ku dhegan jaakada Suleyman
Khamiistii (11/12/2003) ayaa markii ugu horeysey taariikhda ciidamada qalabka sida ee Canada waxaa loo magcaabay wadaad Islaam ah, kaas oo ah nin asalkiisu kasoo jeedo dalka Turkiga, magaciisana la yiraahdo Suleyman Demiray, oo 37 jir ah, oo Canada yimid 1993. Aabihiis wuxuu Iimaam ka ahaan jirey Turkiga, Suleyman markii uu yimid Canada waxa uu iimaam ka noqday masaajidka Turkish Mosque ee Ottawa.
Suleyman waxa uu xafladii ay ka qalin jebinayeen wadaada ku yimid asagoo ku lebisan calaamadda bisha oo ku dhegan jaakadiisa halka ay kuwa kale uga dhegan tahay calaamada istalaabta ah.
Waa tix gelin aad u weyn oo la isiiyey in aan dalkayga u adeego ayuu yiri Suleyman oo ka qayb galayey xafladda qalin jebinta oo lagu soo daray in la akhriyo Qur'aanka.
Riad Saloojee: Magcaabida (Suleyman) waa arin wanaagsan caircan.ca
Ciidamada Canada oo tiradoodu dhan tahay 60,000 waxaa muslim ka ah 200 oo qof oo keliya, laakiin sida ay sheegtay jariidada Tronto Star go'aanka in Suleyman lagu daro wadaadada ciidanka waxay ka tarjumeysaa sida ay ciidamada Canada u noqonayaan kuwo dadka ku jiraa ay kala gedgedisan yihiin (ama meelo kala duwan kasoo jeedaan).
Sida uu sheegay telefishanka CTV, ciidamada Canada waxay u badnaan jireen rag caddaan haysta diinta kirishtaanka, laakiin taas ciidamadu waxay rabaan in ay bedelaan. Waxana uu TV-gu intaas ku daray in ilaa hadda intii ka horeyey waxa keliya ee ay ciidanku lahayeen ay haayeen baadariyo kirirshtaan ah.
Waxaa la baabi'yey heestii qaybta wadaada ee ciidanka ee ahayd "Onward Christian Soldiers," waxaana lagu bedeley Beethoven's "Ode To Joy".
Suleyman waxa uu sheegay in xaaskiisa Emine, iyo labadiisa wiil Selman, oo 7 jir ah, iyo Numan, oo 6 jir ah, ay ku gacan siiyeen go'aanka ah in ay ka guuraan Ottawa oo ka shaqaynayey cisbitaal uu wadaad ka ahaa, halkaas oo ah meeshii uu kaga qalin jebiyey shahaadada master's degree ee diinta oo uu ka qaatay Jaamacadda Carleton University, waxayna u guurayaan Edmonton oo ah meesha uu asagoo wadaad Muslim ah ugu shaqayno ciidamada Canada.
Muslimiinta Canada aad ayey arinta Suleyman usoo dhoweeyeen.
ISHA: Toronto Star | CTV
MA OGTAHAY: Shirkada Qibla Cola
Shirkada Qibla Cole oo Weydiisey in Shirkadaha oo Dhammi muujiyaan In ay Cabitaanada Caadiga ah kudaraan Khamri iyo in kale.
Qibla Cola waa shirkad soo saarta cabitaanka cola oo loogu talo galay dadka muslimiinta ah, waxaana shirkadaas asaastay gabar Muslimad ah oo deggan dalka Ingiriiska oo magaceeda la yiraahdo Zahida Parveen. Waxaa shirkadaas u dejisan in wixii faa'iido ee shirkada laga helo boqolkiiba toban (10%) ay ugu deeqi doonaan dadka tabalaaysan. Dadka cabey Qibla Cola waxay sheegeen dhadhan ahaan in uu dhexeeyo kooka koolaha iyo Biibsiga. Si aad wax badan uga ogaatid shirkadaas, soo booqo shabakada http://www.qibla-cola.com/
Canada oo Ra'iisul Wasaare Cusub Yeelatay
Shalay oo Jimce ahayd (12/12/03) ayaa la dhaariyey Paul Martin si uu u noqdo ra'iisul wasaarihii 21aad ee dalka Canada, taas oo k adambeysey kaddib markii uu jagadaas iska casiley ra'iisul wasaarihii hore ee Canada Jean Chr�tien oo siyaasadda dawlada dhexe ee Canada kusoo jirey 40 sano, taas oo toban sano oo kamid ah uu ahaa ra'iisul wasaaraha Canada.
Paul Martin waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Liberalka ee uu ka tirsanaa ra'iisul wasaaraha hore ee jagada ka degey.
Paul Martin waxa uu ku dhashay magaalada Winsor ee gobolka Ontario sanadkii 1938.
Si aad wax uga ogaatid Taariikhda Paul Martin... Guji halkan
40 Si aad wax uga ogaatid Taariikhda Jean Chretien.. Guji halkan
ISHA: CBC CANADA